ရေနံဓာတုဗေဒများအတွက် HDPE အထည် ရေနံဓာတုဗေဒများအတွက် HDPE အထည် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
HDPE ယက်ထည်များသည်အမျိုးမျိုးသောစွယ်စုံသုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ သုံးနိုင်တယ် ရေနံဓာတုဗေဒများအတွက် HDPE အထည် သိုလှောင်မှုအိတ်ဥပမာ။
Summer Show Plastic Cooperation သည် PP နှင့် PE ယက်ထည်များကိုထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်တင်ပို့သူတို့တွင်ဖြစ်သည် Taiwan။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စက်ရုံများတွင်များစွာသော Poly ယက်ထည်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပြီးယုံကြည်ရသောအရင်းအမြစ်များမှကုန်ကြမ်းများကိုအသုံးပြုသည်။
PP / PE ယက်ထည်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္inတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ယုံကြည်သည်။
ထုပ်ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်စပါးသိုလှောင်ခြင်းအတွက် Laminated PP အိတ်များကိုသင့်အားအကောင်းဆုံးထုပ်ပိုးဖြေရှင်းနည်းကိုရှာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီပေးပါ။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ အခု
ဘုံအသုံးပြုမှု:ရေနံဓာတုပစ္စည်း ၂၅ ကီလိုဂရမ်အထိထုပ်ပိုးသည်，င.ဆ.ရေနံဓာတုအလွှာ,ဒြပ်ပေါင်းများနှင့်ပိုလီမာ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုင်ဝမ်ရှိ HDPE ပေါင်းစပ်အိတ်နှင့်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်သူများကို ဦး ဆောင်နေပါသည်,နှင့် PP ၏မိတ်ဖက်အခွင့်အလမ်းများနှင့်ထောက်ပံ့ရေးစူးစမ်းဖို့သင့်ထံမှစကားကိုနားထောငျဖို့ပျော်ရွှင်ကြသည်/PE ထည်နှင့်ထုတ်ကုန်ယက်.ကျွန်ုပ်တို့၏ PE အိတ်များသည်အလိုအလျောက်သို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ဖြည့်ရန်အတွက်သင့်တော်သည်,ကုန်ပစ္စည်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုသင်၏စီးပွားရေးလိုအပ်ချက်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.wovensack.com.tw/my/hdpe-fabric-for-petrochemical.html
အကောင်းဆုံး ရေနံဓာတုဗေဒများအတွက် HDPE အထည် ကိုရှာဖွေရန်နှင့် ၀ ယ်ရန်အတွက်သင်သည် ရေနံဓာတုဗေဒများအတွက် HDPE အထည် မှထုတ်လုပ်သော၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊ Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံ